Ezokungcebeleka of Krasnodar esifundeni namuhla - akuyona nje iholidi eduze futhi ifinyeleleke abaseRussia, kodwa futhi kuze kube iholidi ngaphambi ukhululekile futhi ezithakazelisayo. Ingqalasizinda esifundeni likhula ngokushesha. Lena obonakalayo ikakhulukazi emadolobheni amakhulu. Ngokwesibonelo, Gelendzhik Ezokuzijabulisa inikeza ezihlukahlukene namuhla.
Ipaki "Olympus" - zonke izinhlobo zokuzijabulisa endaweni eyodwa
Kuphi ngamaholide usuku lonke nomndeni wakho noma wedwa? Edolobheni Gelendzhik nedlelo layo kukhona izindawo eziningana ezinjalo. Omunye ethandwa kakhulu - kungcono kunepaki "Olympus". Gelendzhik inikeza ezihlukahlukene izinketho ezokungcebeleka. Kodwa lemali fun endaweni efanayo uzothola lapha. I "engeza" ungavakashela aquarium, zoo futhi terrarium. izivakashi Young of the complex abakwazi ukudlala edolobhaneni yezingane, kanye nabazali babo kuyoba mnandi ukudlala ngesikhathi alley bowling noma khona ihholo ekhonsathini. Izivakashi futhi anikwa okukhethwa kukho yokuchitha isizungu asebenzayo: okudoba, jeeping, ogibele ihhashi, ATV ngokuqashisa. Ufuna ukubona ngaphambili lonke Gelendzhik? Ezokuzijabulisa ukuthi ngeke abashiye nandaba "Olympus" ipaki - imoto ikhebula kanye emphemeni observation at amamitha 600 ngaphezu kogu lolwandle.
amapaki amanzi edolobheni
Yini iholidi endaweni yokungcebeleka ngasolwandle ngaphandle Ukuvakashela maphakathi ugibele amanzi? Gelendzhik namuhla ngenkathi izivakashi ngesikhathi esifanayo umsebenzi isikhathi ezintathu nje amanzi ipaki esikhulu. Omunye wabo - "Golden Bay" - neyaziwayo njengoba esikhulu kunazo zonke eRussia. Isakhiwo ihlanganisa indawo amahektheli angu-15 lapho ungakwazi ukugibela phezu inqwaba ezikhangayo izivakashi babo bonke ubudala, ukubhukuda echibini, uphumule ogwini bokuzenzela noma abakuwo coffee shop. Emzini ezifana Gelendzhik, ukuzijabulisa, amanzi-ezihlobene, okunikelwe izivakashi cishe kuyo yonke ithuba. Enye amanzi epaki edolobheni - "Hippo". Lawa amachibi ezintathu omkhulu, amanzi emithambekeni 17, ebaleni lokudlala yezingane esiyingqayizivele sika. Inombolo yomhlaba wonke yesikhungo wesithathu imisebenzi amanzi ngokuthi "Dolphin". Amanzi epaki incane, kodwa ngempela ukhululekile futhi ihlanzekile, ke ziyojabula amanani aphansi kanye ubuncane yokuzijabulisa kunesidingo.
Jwayelana izilwane zakwamanye amazwe eduze ngamaholide ngokuvakashela "Safari Park". Phakathi nohambo ungakwazi ekhuphukela phezulu yokhalo Markotkhsky futhi ujabulele ukubukwa ebabazekayo ovela ukuphakama 640 amamitha ngaphezu kolwandle. Ukukhangwa eziyingqayizivele epaki - i emhumeni yokufakelwa, owokuqala eRussia. Uma uthanda ukubona indawo izinkambo, qiniseka ukuthi uvakashela isikhungo embukisweni "Kusukela esikhathini eside esidlule, futhi amanzi." ihlengethwa Modern - kungenye Luhambo, okuyinto uqhosha Gelendzhik. Ezokuzijabulisa izingane eziyinkimbinkimbi inikeza ezihlukahlukene: ungavele ubone uhlelo show, ukuthathwa isithombe nge abaculi, noma ngisho sibhukude nawo. Abathandi eziphila olwandle surely ukujabulela futhi aquarium wendawo. Phakathi nohambo awukwazi kuphela ujabulela zonke imibala zomhlaba ngaphansi kwamanzi, kodwa futhi ukufunda okuningi amaqiniso athakazelisayo mayelana nezinhlobo ezihlukahlukene zezinhlanzi njengabantu nezinye okuthile abantu basemadolobheni abangavamile ulwandle.
Imisebenzi nemizwelo acacile kakhulu
Fans of emidlalweni eyingozi uzongithanda epaki edolobheni "Spider". Kukhona ezitholakala kuwe futhi intambo idolobha, futhi umdlalo Paintball, futhi bendabuko uhla sokudubula. Futhi ensimini ka isikhungo kakhulu, njalo guest ungakwazi kahle isikhali engavamile - a CROSSBOW, blowguns noma umnsalo. Enye indawo ozithandayo lokuphumula - Ipaki ukuzijabulisa e Gelendzhik. Kukhona carousel ngenxa encane kunazo zonke futhi ezikhangayo abadala, ngenkathi ugibele okuyinto obumangalisayo. Ngesikhathi sasehlobo, epaki uhlale ezinomsindo futhi kumnandi, Animators, amathilomu nezibaya lapho ungakwazi ukuthenga ukudla, iziphuzo kanye eziyisikhumbuzo. Kuyini nice ikakhulukazi, ithikithi amanani ezingabizi kakhulu edolobheni resort. Ithikithi zezingane Ukugibela izindleko phakathi $ 100 futhi umndeni noma umuntu omdala - ruble 200-250.
Yini enye ukwenzani Gelendzhik?
Lapho eseholidini unquma ukuhlala lo edolobheni resort, iholide ngeke isidina. Gelendzhik nezindawo ezizungezile eziningi amabhishi uwuhlomele kahle. Abaningi babo babe amapaki amanzi amancane - amaslayidi inflatable nezinye ezikhangayo, ukufaka Hydro nezinye ukuzijabulisa. Omabonakude futhi bezobuka isikebhe uhambo, catamarans, Awama-Glider flying, parachutes. Qiniseka ukuzama ungene nge-scuba diving, uma indawo iholide lakho - Gelendzhik. Ukuze fun, ungase uzame windsurfing noma Ukushushuluza amanzi. Engingakusho nje kule kuma-nightclub edolobheni nemigoqo lapho ungakwazi dance kusihlwa, namanzi amapaki ukunikela ukuvakashelwa Foam amaqembu. Endaweni travel ejensi ukunikela amaholide ezihlukahlukene ihlele ukuthi eseduze ezikhangayo zemvelo emadolobheni angomakhelwane. Gelendzhik - yokungcebeleka, ekahle umndeni noma iholide ngabanye, lapho wonke umuntu uzothola okuthile ngendlela ethandwa nguye.
Ibanga ukusuka Las Vegas-Los Angeles, ikakhulukazi indlela
UDalai Lama - umsebenzi, izingcaphuno namazwi
Ngobani Oligophrenic? Indlela ukubeka lokhu uphethwe